कालापानी र लिपुलेक नेपाली भ–ूभाग हो, कुटनीतिक पहलमार्फत विवाद समाधान गर्छौं : सल्लाहकार डा. भट्टराई – Nidar News
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले ऐतिहासिक तथ्यले पनि कालापानी र लिपुलेक नेपाली भू–भाग भएकोले आफूहरु सोही मान्यतामा अडिग रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कारमा बोल्दै भट्टराईले नेपाली भू–भागलाई भारतीय नक्शामा राखेकोमा आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको स्पष्ट पार्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कालापानी नेपाली भ–ूभाग हो । ऐतिहासिक तथ्यले पनि त्यही भन्छ । हाम्रो मान्यता पनि यही हो । १९६२ देखि त्यहाँ बसेको भारतीय सेना हट्नुपर्छ । कालापानीलगायत सबै सिमा विवाद टुँग्याउनुपर्छ ।’
आयोजित सो साक्षात्कारमा बोल्दै उहाँले सीमा विवादहरु सहमतिअनुसार कुटनीतिक टेबुलमा बसेर समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो, ‘त्यसको आधारमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अर्को विकल्प छैन् ।’ वर्तमान सरकार प्रभावकारी कुटनीतिक पहलकदमी लिनेबारे सचेत रहेको पनि उहाँले सुनाउनुभयो ।
सीमा विवादबारे दुवै मुलुकको सहमतिमा मात्रै निश्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउँदै एकपक्षीय निर्णय अमान्य हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘जुनसुकै समस्याको समाधान कुटनीतिक निश्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।’ सरकारले जि.पि.एस. प्रणालीमार्फत सीमा व्यवस्थित् गर्न गइरहेको पनि सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले यसबारेमा एउटा टोली बनाएको छ, उनीहरुले अध्ययन गरिरहेका छन् ।’
नेपाल र भारतबीच कतिपय सीमा खोलाले छुट्याउने गरेको र कहिलेकाहीँ खोलाले आफ्नो बहाव परिवर्तन गर्दा समस्या हुने गरेकोपनि उहाँले सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कतिपय पिलरहरु हराएका छन् । जमिन अतिक्रमण भएका छन् ।’ नेपाल र भारत दुवैतर्फ रहेका स्थायी संयन्त्रमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्नेपनि उहाँले जनाउनुभयो ।
त्यस्तै, उहाँले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी) मा सीमा विवादसम्बन्धी एउटा बुँदामा विस्तृत सुझाव समेटिएको जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले विस्तृत सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेका छौं । ईपिजीको प्रतिवेदन छिटो बुझ्नुपर्छ । यसमा नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै उतारचढावबारे समग्र सुझाव छ ।’
उहाँले नेपाल–भारत सम्बन्ध आजको युग सुहाउँदो बनाउनेगरि सरकार अघि बढ्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।
नेपाल र भारत दुवै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश भएकोले कुटनीतिक पहलमार्फत समस्याहरु समाधा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । र, यही कुरा चीनसँगपनि लागू हुने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले जनता र भुगोलको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । भट्टराईले भन्नुभयो, ‘सरकार यसबाट दायाँबायाँ हुँदैन् । सरकार आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्दैन, यदि हाम्रो सिमा तलमाथि भएको रैछ भने पनि हामी कुटनीतिक टेबुलमार्फत समस्याको हल गर्छौं ।’
त्यस्तै, उहाँले लिपुलेक पनि नेपालकै भएको बताउनुभयो । भारत र चीनले लिपुलेकबारे गरेको सहमतिमा नेपालले आफ्नो पोजिशन राखिसकेको पनि उहाँले सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अध्ययनको आधारमा र तथ्यांकको आधारमा लिपुलेक हाम्रो हो । यसमा हाम्रो दाबी हुन्छ ।’
लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच भएको सहमति बेठीक भएको उहाँको दाबी छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यसबारेमा नेपालले दुवै देशलाई पत्राचार गरेर आफ्नो धारणा राखेको छ ।’ उहाँले आफूहरुले नेपालको भ–ूभाग कुनैपनि हालतमा नछोड्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
फरक प्रसँगमा उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अत्यन्तै राम्रो भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँ अहिले दैनिक कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ । आजपनि उहाँले साग खेलकुद प्रतियोगिताबारे ब्रिफ लिनुभएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा सहभागी हुँदैहुनुहुन्छ ।’